NGUBANI USINISA BABCIC? UPOPPY HARLOW UMYENI WIKI BIO, IMINYAKA, IXABISO LE-INTANETHI - IINDABA
Ngubani uSinisa Babcic? UPoppy Harlow umyeni Wiki Bio, iminyaka, ixabiso le-intanethi
Ngubani uSinisa Babcic? Umyeni kaPoppy Harlow uWiki Bio kunye nobudala
Ngelishwa, asinayo nayiphi na idatha malunga nomhla wokuzalwa okanye indawo yokuzalwa yeSinisa Babcic, ebonisa ukuba ubudala bakhe kunye nesignali ye-zodiac ayaziwa. Ngokweminye imithombo, ekuqaleni wayengummi waseMzantsi Korea, nangona kunjalo ngoku ungowaseMelika - uchithe uninzi lobomi bakhe bokuqala ngaphakathi e-US. Uyaziwa kakhulu njengomyeni kaPoppy Harlow, intatheli eyaziwayo, nangona kunjalo emsebenzini wakhe, ungumhlalutyi wezamashishini kwaye, kuba enenzuzo kweso sifundo, wavunyelwa ukuba aphuhlise ubulumko bemisebenzi kwaye akhule angabonakali. ngaphakathi kwimithombo yeendaba, ethi ibuze imibuzo malunga neminyaka yokukhula kwakhe kunye nokukhula kwakhe.
Isikhumbuzo esilula nje sokuba inqaku lenziwe kwaye liphethwe kuphela yi-biologytribune.com. Inqaku alinakuphinda lipapashwe kwamanye amaphepha okanye amaphepha. Ilungelo lokushicilela likhuselwe yi-DMCA. Zonke iikopi ezifunyenweyo ziya kuxelwa.
Ubonelelo loqobo: https://biographytribune.com/who-is-sinisa-babcic-poppy-harlow-husband-wiki-bio-age-net-worth/
Ke isityebi iSinisa Babcic ukusukela phakathi ku-2019? Ngokwemithombo egunyazisiweyo, lo mhlalutyi weshishini unexabiso elingaphezulu kwe-400, 000 yeedola, kunye nobutyebi bakhe buqokelelwa kubuchwephesha bakhe ngaphambili. Nangona kunjalo, i-Babcic khange ithethe ngezinto zakhe, ezifanayo nezithuthi kunye namakhaya, nangona kunjalo ubonakala ekwimeko yokujongana naye kunye nendlu yakhe ngokwezezimali. Kuxelwe ukuba, iqabane lakhe, uPoppy Harlow, unexabiso le-intanethi elingaphezulu kwe-6 yezigidi zeedola, esenza umsebenzi obalulekileyo ngemali yabo.
Ubuhlanga kunye neMvelaphi
Ethetha ngobuhlanga bukaBabcic, ungowaseCaucasus kwaye uneenwele ezimdaka ngombala kunye namehlo ansundu, ahambelana nebala lakhe. Ukujonga kwiifoto ezilapha kwiwebhu, unomdlalo omiselweyo kwaye uyikhathalele inkangeleko yakhe, ebonisa ukuba ubeka umzamo kunye nexesha kwinto yakhe ebonakalayo. Njengakwisikolo sakhe, wafunda kwiDyunivesithi yaseIllinois, egxile kwezeMali zeShishini kwiKholeji yezoShishino yaseUrbana-Champaign.
USinisa Babcic, uPoppy Harlow kunye nentombi yabo
USinisa waqala umsebenzi wakhe njengomhlalutyi weshishini, kwaye ukusukela ngoko, ukongezile esebenza njengebhanki yezemali. Iinkampani azisebenzeleyo ukuze zamkele iThomson Reuters, iTemenos kunye ne-RBC yoLawulo loButyebi. Ngo-2013, waqala wasebenza njengoMphathi oMkhulu e-Ernst & Young LLP, kwaye useza kuqeshwa yile nkampani, kodwa ngokuqinisekileyo yeyiphi indawo engaziwayo.
USinisa ukhetha ukugcina uninzi lweedatha zakhe ezingezizo ezasesidlangalaleni ngasemva kweminyango evaliweyo, kwaye akanamandla nakweyiphi na imidiya yoluntu, eyenza ukuba kube nzima kwaba ukunxibelelana naye. Nangona kunjalo, iqabane lakhe uPoppy linamandla kwi-Twitter nakwi-Instagram, esiza kuthetha ngayo eyongezelelweyo ngaphakathi kwinqaku.
Usuku olumnandi loMama oluvela kwiqela lethu lasendle ukuya kwelakho! pic.twitter.com/qUnAz9iHcG
-Poppy Harlow (@PoppyHarlowCNN) Ngomhla we-12, 2019
Umfazi uPoppy Harlow kunye noSapho
USinisa Babcic ubonakala njengendoda etshatileyo ngethamsanqa - watshata uPoppy Harlow ngo-2012, babedla ngokuba nomntwana wabo wokuqala, oyintombi egama linguSienna, ngo-Epreli ka-2016. NgoFebruwari ka-2018, babenomntwana wabo wesibini, unyana abathi nguLuca. Umzi ubonakala ngathi uhlala ubomi obonwabileyo nobunobunewunewu, ekuphela kwento ebeka esiphelweni sosuku.
UPoppy Harlow wazalwa njengoKatherine Julia Harlow nge-2 kaMeyi 1982 , Okuthetha ukuba uneminyaka engama-37 iphelelwe lixesha kwaye umqondiso wakhe we-zodiac yiTaurus. UPoppy, ubuzwe bakhe baseMelika, yeyona nto ibizwa ngokuba yintatheli, oxele kakhulu i-CNN kunye neForbes.
Umsebenzi kaPoppy Harlow
UHarlow wenza amatyala akhe ngo-2009, xa wayeqala ukuzibandakanya kwigumbi leendaba le-CNN, i-venture ayesasebenza kuyo njengangoku. UPoppy kucingelwa ukuba ubandakanyeke kumanyathelo abalulekileyo, afana nolu luhlu lulandelayo kunye noAnderson Cooper 360 ° ngo-2012 nango-2013. Ngo-2017, wakhonza ngenxa yokuba i-anchor kunye nomnxibelelanisi woMhla oMtsha. Ngokubanzi, unee-gigs ezili-12 ngaphakathi kwesifundo sosasazo, esamvumela ukuba azenzele igama, kwaye afumane ulwazi olongezelelekileyo. Siqinisekile ukuba maninzi amanyathelo abalulekileyo okubuyela kuye kungekudala okanye kamva, njengoko enesiphiwo kwaye esebenza nzima.
Ukuba ngaphakathi kwesihloko sokuzonwabisa kubonisa ukuba uPoppy unamandla kwimidiya yoluntu efana ne-Twitter kunye ne-Instagram, kwaye uyayisebenzisa ukuthetha kunye nabalandeli bakhe ukongeza kwintengiso yomsebenzi wakhe. Unabalandeli abayi-100,000 kwilixa elingaphambili, kwaye ezimbalwa zezona zithuba zakhe zintsha zamkela ividiyo ethandekayo yentombi yakhe itya ispaghetti kunye ne-caption efunda nje into enye yokwenza ixesha lakho lobusuku. Abalandeli bakhe babonakala beyithandile, njengoko babeqhubeka bebhala imiyalezo emininzi yeelekese exelela uPoppy ukuba uyathandeka kangakanani umntwana wakhe. Uye wongeza i-tweeted ngokuqinisekileyo ngesinye seziqendu zakhe zeBoss Files, kubandakanya iNew #BossFiles nomtyali-mali wezobuchwephesha u-Glenn Hutchins ondixelela ukuba kutheni ecinga ukuba kufuneka sijongane notshintsho kubungxowankulu ngoko ke busebenzela abantu baseMelika abongezelelekileyo. .
UPoppy usebenzisa iakhawunti yakhe ye-Instagram ukuze abelane ngeefoto kuye ubomi bakho , evumela abalandeli bakhe ukuba bathathe ngcono bajonge okwenzekayo emva kweminyango evaliweyo. Akakhange afake ixesha elidlulileyo ifoto yentombi yakhe kunye ne pal yakhe, kunye nengcaciso efunda iinkawu ezimbini zelekese kumyezo wezilwanyana! Enkosi nge shot. Ngaphandle koko, wathumela ifoto yakhe, eyomyeni wakhe kunye nonyana wabo uLuca, kubandakanya Ukudubula e-LA kunye nokusweleka kwenkwenkwe yam yeelekese kakhulu. ULuca. Omnye umlandeli uphawule, esithi indlela emangalisa ngayo uPoppy kunye nendlu yakhe eluswini nangaphakathi.
Izigaba: Inetflix Umqala Iwiki
Ixesha elincinci 1 isiqendu 8
Imoe kunye neethan bradberry
ungaze uphuze indoda enxibe ikrismesi
arin kwaye suzy usatshatile
jerry garcia net efanelekileyo
I-carla medrano embi